Umbala Wokushisa - Liveolight.com
Isikhumba Soft One-Off Cover Soft Soft Inkinga Yokuphikisana Ukhiye Wokukhanyisa Ukukhanya Kwe-Edc
♥ Itholakala kumbala we-7 futhi ungenza ngokwezifiso umbala wakho ozithandayo. ♥ Usebenzisa i-LED ye-Ø5 nxazonke ngesikhatsi sokugijima esiphezulu i-10h. ♥ Kunikwe amandla ngebhethri ye-AG10x1, okuyi ...
I-2200 Mah Inombolo Eyingqayizivele Eyingqayizivele ye-XNUMX Mah I-Multi-Angle Direction Motion Sensor Shintsha Isikhwama Se-Edc
♥ Usebenzisa i-COB LED, enezikhwama eziphezulu ezifika ku-150 lumens. ♥ Kunikwe amandla yi-2200 mAh I-battery ye-i-ion kanye ne-12 yamahora wokugijima. ♥ I-Switch Senseor switch ...
1000lm 4 × 18650 Ibhetri Popular Popular Camping Wireless Somlomo LED Lantern nge Power Bank
♥ Imibala eminingi, I-Wireless Music Playing, Ukuphatha Isisindo ♥ 15PCS I-SMD 2835 LED, i-3 Yokusebenza Amamodi ♥ 4x18650 (3.7V 2200mAh) Amabhethri e-lithiamu, angasetshenziswa njengamandla ...
I-Multi-Functional Handsize I-Thumb Switchable Ungashintsha 1w I-Plug Car Car Charging Flashlight For Vehicle
Isixhumi se-173 lumen esiphathekayo se-bluetooth ephathekayo nge-port port
Izici zeMkhiqizo: I-1) Inombolo yombhalo: I-SCB-1513 2) I-ABS: I-ABS + I-Aluminium Alloy + I-Steel Meshes 3) I-Finishing Finishing: I-4 I-China 1W I-Lamp Umzila: I-F5 Round (0.1W) * 6 5 ) 3.7V 1800mAh ...
Ngokuvamile, ukushisa kwamabala okukhanya kwe-LED kungahlukaniswa ukukhanya okumhlophe (mayelana nokushisa kombala we-6500K), umhlophe ongathathi hlangothi (mayelana ne-4000k) nomhlophe ofudumele (mayelana ne-3000K).
Kungani kufanele senze ukwahlukana okunjalo? Ukuphendula umbuzo onjalo, sidinga ukwazi ngalokho okubizwa ngokuthi "ukunikeza umbala". Ukunikezwa kombala, okuchazwe njengokulinganisa kusuka ku-0 kuya ku-100 ku-Color Rendering Index (i-CRI), kuchaza indlela umthombo okhanyayo owenza ngayo umbala wezinto kubonakale emehlweni omuntu nokuthi ukubonakala okungafani kahle kwe-shade kumbala kubonakala kanjani. Ukuphakama kwezinga le-CRI, kungcono ikhono lokunikeza umbala walo. I-CRI yokukhanya okukhanyayo okukhanya okukhanya okukhanyayo kwe-LED iphathelene ne-75% (ephakeme ukushisa kombala, yehlisa i-CRI), ngenkathi ama-flashlight amhlophe angathathi hlangothi kanye nama-flashlight afudumele afana ne-80%.
Ziyini lezi zibalo ezisho kithi? Isibonelo, kusihlwa, ukukhanya okukhanyayo kwe-flashlight kuphakeme ngokwanele ukubona izihloko zezindaba, kodwa imininingwane yezihloko kanye nokukhishwa zidinga i-CRI enhle ukuyiqaphela. Lokhu kusho ukuthi "Ukukhanya" yedwa kungasiza ekuboneni umjikelezo wendaba. Kodwa uma kuziwa embala wezinhlulelo, imininingwane kanye nokukhishwa, kudinga i-CRI encane ye-75% (Uma ukuphazamiseka okubukwayo nokuzivumelanisa kungaxhunyiwe, i-135% iyadingeka.) Ukuthatha umbala we-100% womphumela wokunikeza umthombo wokukhanya. Yingakho sihlala siphishekela i-CRI ephakeme.
Izimiso zokukhanyisa zokukhanya kwe-LED ezimhlophe zihamba kanje: i-electron ihamba nge-chips ukukhipha ukukhanya okwesibhakabhaka, bese ikhuthaza ipowder fluorescent ukukhipha ukukhanya okwesibhakabhaka, ekugcineni ukukhanya okubili kuhlangene zibe izibani ezimhlophe. I-CRI yokukhanya ephuzi iphakeme kunokukhanya okwesibhakabhaka, ngakho-ke ukuphakamisa inani lokukhanya okuphuzi kungaphakamisa i-CRI. Kusukela kulokhu, ukufudumala umbala okhanyayo, kuphakama i-CRI futhi kufaneleka kakhulu emidlalweni yangaphandle. Ngaphandle kwalokho, izinga lokushisa lombala eliphansi lokufudumala nobude obude obuvumela ukuqhubeka nokukwazi ukuthola ukungena kwemvula nokushisa kwezulu. Yingakho imidlalo yangaphandle idinga umbala oshisayo we-flashlight.
Ngakolunye uhlangothi, ukusebenza kahle kwe-fluorescence ejabule kakhulu, ukukhanya okuphelele okukhanyayo okukhanya okumhlophe kuyoba phansi kakhulu nombala obala kakhulu. Igoli lizo "daya" izihloko ezicatshangelwe njengokungathi likhanyiswa isibani esincane sogesi. Ukukhuluma ngokuzwakalayo, imikhiqizo ye-LED yokukhanya emhlophe engathathi hlangothi iyisinqumo esifanele semidlalo yangaphandle engenawo kuphela umbala owanelisayo wokunikeza kanye nokukwazi ukungena, kodwa futhi ugweme ukukhanya okukhulu nokunciphisa inkinga.